Aadaa – Page 4 – siifsiin
Miila, harka, ilkaan, ija, gurra, funyaan, garaa ta’anii walii galteedhaan jiraatu turan. Booda warri kaan walii galteen garaa yakkuu calqaban bu’aa hin buusu jedhaniiti. Garaanis, “maalan balleesse, maaliif na yakkituu? Jedhee gafannaan,” “ati otoo hin hojjetiin waan nuti dhamaanee finne nyaatta,” jedhaniin, achumaanis, “deemi nurraa” jedhaniin, garaanis dubbiin kun murtiitti akka dhiyaatu gaafate. Isaanis, “haa … Continue reading ODUU DURII
Baacoon aartii uummata oromoo bashannansiisaa barsiisudha. Itti dabalas fedhii dubbisuufi barreessuu dubbisuu yookaan barreessaa kan guddisuudha.Haaluma kanaan baacoo godina Gujii keessaa kan arganne akka amaan gadiitti dhiyeessuuf yaalleerra. 1.Ifii boo'e moo isinii boo'e? Durii durii jedhan namicha tokkotu jira. Namichi kun qabeenya kana hinjenne kanneen akka:loon, gaala, farda, gaangee,re'ee, hoolaafi lukkuu kanneeniifi kan biroo bacaa … Continue reading Baacoowwan Oromoo Godina Gujii
Uummanii Oromoo sirna jiruufi jireenya isaa keessatti aadaa akka cirracha galaana keessaa hammaaramee hindhumne baay’inaan qaba. Aadaan kanneenis kan uffannaa, nyaataa, safeeffannaa, waaqeffannaa, amantii, bulchiinsaafi kan kana fakkaatan tarreessuun ni danda’ama. Bu’uura kanaan barruulee kana keessatti, akkuma aadaa bulchiinsa Oromoo keessatti sirni Gadaa iddoo olaanaa qabu, sirni Siiqqee dubartootaas gahee taphatu dhiyyeesuuf barbaadeen. Siiqqeen … Continue reading Siiqqee